Bloard: ampiasao ny keyboard maintin'ny iOS 7 (Cydia) na aiza na aiza | Vaovao IPhone
Ao amin'ny iOS 7 dia manana lohahevitra fitendry roa azonay jerena amin'ireo rindranasa tadiavin'ny mpandrindra sy Apple, izany hoe tsy afaka manana ny kitendry mainty na fotsy foana isika. Saingy, heveriko fa ny mainty dia be maso kokoa noho izy mifanaraka kokoa amin'ny fahitako ny iOS sy ny famolavolana ny iOS 7, fa ho an'ny tsiro loko (niniana natao). Ho an'ireo izay tia ny keyboard mainty ary te hanana azy io foana Manolotra an'i Bloard aho, tweak iray ahafahan'ny mpampiasa mametraka ny loko misy anao amin'ny keyboard iOS 7: fotsy foana na mainty foana. Tena tweak tena ilaina izany raha te hanatsara ny famolavolana ny fitaovanao ianao (hahatonga azy io ho kanto kokoa).
Manova ny lohahevitra fitendry iOS 7 miaraka amin'ny tweak Bloard
Bloard tweak io maimaim-poana izay hitantsika ao amin'ny repo ofisialin'ny BigBoss ary saika tsy misy fikirakirana hanovana azy io. Amin'ny maha-tweak maimaim-poana antsika dia zava-dehibe ny fampidinana azy ao amin'ny toerana ofisialy satria mety nisy loharano hafa nanampy zavatra manimba ny iPad.
Aorian'ny famerenana miaraka amin'i Cydia dia hitantsika ny fomba ananantsika fizarana vaovao amin'ny fampiharana "Settings" an'ny iPad, araka ny hitantsika amin'ny sary etsy ambony. Safidy iray ihany no hamboarintsika: iOS 7 loko fitendry.
Raha tiantsika ho fotsy foana ny kitendry iOS 7 dia tsy maintsy misy ny bokotra "Enable" Bloard kilemaina
Etsy ankilany, raha tiantsika ho mainty lalandava ny kitendry, ny bokotra "Enable" Tsy maintsy halefa.
Araka ny hitanao dia tena tsara ny vokany ary, araka ny hevitro, heveriko fa Apple dia tokony hanome safidy hisafidy ny lohahevitra keyboard an'ny iOS 7 amin'ny tanindrazana ary tsy mila mandeha amin'ny tweaks toa an'i Bloard.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » Bloard: ampiasao ny keyboard mainty iOS 7 (Cydia) na aiza na aiza
Nametraka azy aho ary tsy manova na inona na inona 🙁
Andramo esory ny fampiharana tadiavinao amin'ny multitasking
Valiny tamin'i Angel González
Mametraha endritsoratra rehetra amin'ny fitaovanao iOS amin'ny AnyFont
Mombamomba ny fikirakira ho an'ny iPhone